Talking about protest (ဆန္ဒပြခြင်း) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 11, 2012 at 17:08 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပွင့်လင်းလာပြီ။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုလျှောက်နေပြီလို့ပြောသံတွေဆူညံနေတဲ့ ခေတ်မှာ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အစိုးရ၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို မကျေနပ်လို့ဖြစ်စေ၊ သဘောမတူလို့ဖြစ်စေ ကန့်ကွက်တာတွေ၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေအတန်အသင့် လုပ်နိုင်လာကြပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေအတွက် နောက်ကျမကျန်နေရအောင် ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေလေ့လာကြည့်ရအောင်။
a situation in which several people are showing publicly that they don't like something.
e.g. The senator rose to register his protest (Noun)
They are protesting against the new law. (Verb)
She protested that she was innocent. (Verb)
လူစုလူဝေးတစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့မကြေနပ်ချက်တစ်ခုကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။
A person who is protesting against something.
အပေါ်ကလို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့သူ
e.g. Dockers voted for an all-out strike.
ဒါကတော့ မိမိတို့ လိုလားတဲ့တောင်းဆိုချက်ရအောင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂက အလုပ်မဆင်းဘဲသပိတ် မှောက်တာမျိုး၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂက ကျောင်းမတက်ဘဲသပိတ်မှောက်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။
a public meeting or march protesting against something or expressing views onapolitical issue:
a pro-democracy demonstration
demonstrations against the poll tax
Protest နဲ့ Demonstration ဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာအဓိပ္ပါယ်တူအနေနဲ့သုံးနိုင်သလိုအနည်းငယ်ကွဲလွဲစွာလဲသုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြောနိုင်တာကတော့ demonstration isaform of protest ဆန္ဒပြမယ်၊ သပိတ်မှောက်မယ်၊ ချီတက်ဆန္ဒပြမယ်၊ စာရေးကန့်ကွက်မယ်၊ စတဲ့ကန့်ကွက်နည်းတွေအများကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ demonstration ဆိုတာ မထောက်ခံတဲ့အခါမှာလည်းပြတာရှိသလို၊ ထောက်ခံကြောင်း ပြတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
A little book orapiece of paper with information about something.
ဆန္ဒပြသူတို့က သူတို့လိုလားတဲ့အချက်တွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရသလဲ၊ သပိတ်မှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကို အများပြည်သူကို ဝေငှကာရှင်းပြစည်းရုံးတဲ့ စာအုပ်ငယ်၊ ကြော်ငြာစာရွက်များဖြစ်ပါတယ်။
A very thin book withapaper cover with information about something.
လက်ကမ်းကြော်ငြာထက်အနည်းငယ်ပိုထူပြီး အဖုံးပါ စာအုပ်ပါး။
A large group of people in the street.
A form of protest that involves sitting on the ground and refusing to move.
နေရာတစ်နေရာတွင်ထိုင်ရာမထ ဖယ်မပေးဘဲ ဆန္ဒပြခြင်း။
A prolonged refusal to eat, carried out asaprotest byaprisoner.
e.g. One hundred students beganahunger strike
အထူးသဖြင့်ထောင်တွင်းမှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြတာမျိုးပါ။ ထောင်တွင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်းဟာ အပြင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြထာထက်ပိုပြီး လေးနက်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပြင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာဟာအစားအသောက်ကို တစ်ယောက်ယောက်က တိတ်တဆိတ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ယူဆတတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
Riot (အဓိကရုဏ်း၊ ဆူပူအုံကြွမှု)
A situation in which people in the street are violent/burning things, etc.
e.g. Riots broke out in the capital.
မကြာခဏဆိုသလို ဆန္ဒပြနေရာကနေ တစ်ဘက်ဘက်ကတင်းမာသူတစ်ချို့ကြောင့် လူထုဟာဒေါသနဲ့တုန့်ပြန်ရာကနေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကာပစ္စည်းများချိုးဖျက်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်းစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။
Baton Charge (နံပါတ်တုတ်ဖြင့်နှိမ်နင်းခြင်း)
A situation in which the police run at protesters with their batons (the long stick they use to hit people).
လူအုပ်ကိုဖြိုခွဲရာမှာ လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့တွေက ဆန္ဒပြသူများထံနံပါတ်တုတ်ဖြင့် နှိမ်နင်းလေ့ရှိပါတယ်။ နံပါတ်တုတ်ကို နောက်တစ်မျိုး truncheon လို့လဲခေါ်ပါသေးတယ်။
March (ချီတက်သည်။ စီတန်းလှည့်လည်သည်)
Whenalarge group of people "march" foracause, the all walk together.
အရေးတစ်စုံတစ်ရာအတွက် လူထူကြီးက စီတန်းလှည့်လည်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသည်။
A short phrase that explains what something is about.
ဆန္ဒပြသူများက ကိုယ်လိုချင်တာကို တို့အရေးဖြင့် ထုတ်ဖော်ကြွေးကြော်ကြသည်။ ကြွေးကြော်သံ ကောင်းရင်ကောင်းသလို လူထုကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်သလို အာဏာပိုင်တို့ကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
Turn violent (ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်)
Ifasituation "turns violent", it becomes violent and people may get hurt.
Disperse the crowd (လူစုခွဲ)
If the police "disperse the crowd", they do things to break up the group of people.
ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလူထုကိုဖြိုခွဲဖို့ မီးသတ်ပိုက်ဖြင့်ထိုးခြင်း၊ မီးခိုးဗုံးနှင့်ပစ်ခြင်း၊ ရာဘာကျည်ဆန်ဖြင့်ပစ်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးနိုင်ပါတယ်။
Imposeacurfew (အပြင်မထွက်ရအမိန့်) Liftacurfew (ကာဖျူးအမိန့်ရုတ်သိမ်း)
If the government "imposeacurfew", they say that it's illegal to leave your house afteracertain time (6pm, for example)
e.g. You'll be in trouble if you get home after curfew.
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တာများလာ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းဖို့သတ်မှတ် အချိန်အတွင်းအပြင်မထွက်ရအမိန့်ကို အစိုးရကထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ dusk-to-dawn curfew ညမထွက်ရအမိန့်၊ နေ၀င်မီးညိမ်းအမိန့်တွေပေါ့။ သူကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တွဲလာတတ်ပါတယ်။
A situation in which the police force people intoarestricted area and keep them there foraperiod of time.
Strip of material worn around the upper arm asaform of identification or protest or mourning
၈၈ အရေးအခင်းတုန်းက ဆန္ဒပြသူတွေ ကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ခွပ်ဒေါင်းပုံလက်ပတ်တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်ကနှိမ်နင်းရေးဘက်တော်သားတွေကတော့ တာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။
A funnel-shaped device used to direct and amplify the voice. (လူအများကြီးကြားနိုင်အောင် အော်လံတွေသုံးကြရတယ်။ အသံချဲ့စက်တပ်ပြီးသားအော်လံကို loud-hailer (US and Canadian) bullhorn) လို့ခေါ်ကြသေးတယ်။
ကြွေးကြော်သံတွေ၊ ဆောင်ပုဒ်တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေကို လက်ရေးနှင့်ဖြစ်စေ၊ ပုံနှိပ်လို့ဖြစ်စေ ကတ်ထူပြားပေါ်မှာရေးသားတောင်းဆိုကြပါတယ်။
a long strip of cloth bearingaslogan or design, carried inademonstration or procession or hung inapublic place.
e.g. A nuclear disarmament banner was carried round the war memorial
placard ကသေးလို့မကြေနပ်ရင် ဒီထက်ပိုထင်ရှားအောင်ပိတ်သားပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခုခေတ်စားနေတဲ့ဗင်နိုင်းနဲ့ရိုက်နှိပ်လို့ဖြစ်ဖြစ် အသိပေးနိုင်ပါတယ်။
e.g. The police action led to riots, with hundreds of demonstrators building barricades and burning vehicles
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဘက် သွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားအောင် အပြန်အလှန်အတားအဆီးတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သံစည်ပိုင်းတွေ၊ သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ပေါ့။
Tear gas (မျက်ရည်ယိုဗုံး)
Gas that causes severe irritation to the eyes, chiefly used in riot control to force crowds to disperse.
e.g. Police used water cannon and tear gas against demonstrators
အခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့အခါ လူစုကွဲအောင်အင်းအားသုံးဖြိုခွင်းရာမှာမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ လည်းသုံးတယ်။
Water cannon (စူးအားပြင်းရေပြွတ်/ မီးသတ်ပိုက်)
A device that ejectsapowerful jet of water, typically used to disperseacrowd.
လူစုခွဲရာတွင်သုံးသည့်စူးအားပြင်းရေပြွတ်၊ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုး နောက်မီးခိုးဗုံးနဲ့ပစ်တဲ့အခါ ရေမွန်းတဲ့ဒဏ်နဲ့မျက်ရည်ယိုတဲ့ဒဏ်ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါနော်။
Riot police (လုံထိန်းရဲ)
A special section ofapolice force trained to deal with noisy, violent groups
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုံးလေးတွေအခြေခံသိနိုင်ပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုခုမှာပါဝင်လို့နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်တွေလာမေးတဲ့အခါ ပြန်ဖြေနိုင်မယ်၊ facebook ပေါ်ကနေ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသတင်းအတိုအထွာလေးတွေလည်းတင်နိုင်မယ်လေ။
ဒီ dialogue လေးနဲ့တွဲလေ့လာလိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
Marianne and Declan are organisingaprotest against plans to turn local park intoacar park.
Marianne: OK, so what's the plan?
Declan: Well, they're going to dig up the park on Monday. So, I thought that we should set up
our camp in the park on Sunday night. Then, on Monday morning, we can stageasit-in.
Marianne: Great! How many people are coming?
Declan: Well, there's you, and, erm, there's me.
Marianne: Is that it?
Declan: You don't think it's enough?
Marianne: A demonstration needs hundreds, even thousands, of people.
Locals are really angry about this issue. We can easily getabig crowd of
protestors together. Have you been handing out those leaflets?
Declan: Erm... I've beenabit busy with work and stuff.
Marianne: What about the placards? Have you put some catchy slogans on them?
Declan: I've got this. (He holds upasmall piece of paper. Marianne reads it.)
Marianne: "Save the park." That isn't very catchy. And it's quite small. In fact, I can hardly read it.
What about this, "Hands off our trees!"?
Declan: Yeah, that's great!
Marianne: And we'll needamegaphone so the crowd can hear us! And let's chain ourselves
to the trees. They'll have to cut through us with the chainsaws!
Declan: Erm... I was thinking of somethingabit more peaceful. What if the riot police come?
What if they charge... or throw teargas?
Marianne: Even better! Imagine the publicity.
Declan: Actually, I've got to go to work on Monday. So, erm, I'll be off. (Walking away)
Hey, but good luck, and I hope it all goes well.
Permalink Reply by Min Tun on December 12, 2012 at 7:05
Thanks you man...........................................
Permalink Reply by Sulay Yee on December 12, 2012 at 10:28
Permalink Reply by december naymintun on December 12, 2012 at 10:39
Permalink Reply by Tin Myintzu on December 12, 2012 at 10:39
Permalink Reply by Nyilinnthit Linnthit on December 12, 2012 at 10:55
Excellent. But I have just confused about the first example of Protest. '' They are protesting against the new law.'' It states the use of Noun 'protesting'. Is it right? Could you explain, please? Thanksamillion.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on December 13, 2012 at 8:42
protest can be used asanoun or asaverb. The example "They are protesting against the new law" demonstrates the use of protest asaverb.
Permalink Reply by richaloo on December 12, 2012 at 11:21
I note down all vocabulary
Permalink Reply by Ye Htet Naing on December 12, 2012 at 11:29
Permalink Reply by aung aung on December 12, 2012 at 13:25
Ko Zar Ni,
My protest (noun form here) was that the statement of being using noun form for protest in the e.g. sentence They are protesting against the new law. is incorrect.
Anyway, thanks for the sharing!
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on December 13, 2012 at 12:40
uh, I see my mistake! Thank you Ko Aung Aung for correcting me. I'll change it.
Permalink Reply by unoqueen on December 12, 2012 at 13:46
Permalink Reply by Tin Wah Wah Aung on December 12, 2012 at 14:10